Ndị ahịa na-alụ ọgụ azụ! | Martech Zone
Wenezde, August 23, 2006 Wenezde, August 23, 2006 Douglas Karr
Amaghị m na onye ọ bụla ga-arụ ụka na webụ bụzi ihe enyemaka kachasị mma maka ndị mmadụ nyocha. Taa, achọtara m ihe na Dealzmodo site na Gizmodo's Blog maka a $ 79 17 screen ihuenyo ewepụghị nyochaa. Na-ada ụda nke ọma ịbụ eziokwu?
Otu n'ime ihe ndị dị na blọọgụ na-ekwu iji lelee eCost (onye na-ere ahịa) na nke ha Ntụle at ResellerRatings.com. eCost nwere ụfọdụ ọkwa dị ala na sistemụ - yana mgbapụta mgbapụta dị oke egwu dị ka ndị nyocha 87 n'ime ọnwa 6 gara aga na ngụkọta 587.
Enwere m ihere ikwu na ahụtụbeghị m ResellerRatings.com na mbụ. Luckily, m na-azụ ahịa na NewEgg.com ezi a bit na ha nwere nnukwu Fim! (Ahụrụ m nhọrọ ha nke kọmputa na-enweghị isi!).
Ọ dịbu Asịwo Kpachara Anya....
ma ugbu a ọ bụ Ndi n’ere ahia kpachara anya
Edere m aha ResellerRatings.com ma ga-elegide anya na ụlọ ọrụ ndị m nwere ike zụta site na ya mana akabeghị. Kedu ezigbo ihe enyemaka na ụzọ dị ukwuu maka ndị na-azụ ahịa ịlụ ọgụ! Ahuru m gi n'anya, akpu na ihe nile!
Ọrụ Blogging na IE7 Development
Sep 7, 2007 na 1:08 PM
E-eri screwed m merụsịrị na-eji ọkụ kwesịrị ịma banyere ha ama ngwaahịa na ọrụ